Ny andraikitry ny bilaogy amin'ny fampandrosoana IE7 | Martech Zone
Alarobia 23, 2006 Alatsinainy, Aogositra 24, 2009 Douglas Karr
Vao haingana aho no nanoratra mahakivy lahatsoratra momba ny fanosehana Microsoft ho avy amin'ny Internet Explorer 7.
Ny bilaogy Internet Explorer dia manana lahatsoratra omaly izay mety hanome vaovao tsara:
IE 7 dia dingana iray amin'ny ezaka ataontsika hanatsarana ny fanarahan-dalàna (indrindra ny manodidina ny CSS).
Microsoft dia nilaza fa ny fanehoan-kevitra avy amin'ny loharanom-baovao marobe, anisan'izany ny IEBlog, dia nanampy azy ireo "hanao laharam-pahamehana ny fiasa" sy hamantatra ireo "bibikely mampalahelo indrindra". Misaotra nihaino, Microsoft! Natahotra ahy ianao. Ankehitriny dia manahy tsotra izao aho. Manantena ny hahazo IE 7 aho ary ho maivamaivana.
Manazava fa ny fanaovana bilaogy dia afaka mitondra fahasamihafana toy izao amin'ny orinasa iray.